Northern Cape Province - Wikipedia
Northern Cape Province, Koonfur Afrika. Waqooyiga Cape (Afrikaanka: Noord-Kaap, Tswana: Kapa Bokone; Xhosa: uMntla-Koloni) waa gobolka ugu weeyn ee degaanka Koonfur Afrika. Waxaa la abuuray 1994 markii gobolka Cape Cape la kala qaybiyay. Magaaladu waa Kimberley. Waxaa ka mid ah Kalahari Gemsbok National Park, oo ka mid ah Seeraha Kgalagadi Transfrontier Park, oo ah goob caalami ah oo lala wadaago Botswana. Waxa kale oo ka mid ah Augrabies Falls iyo gobollada dhirta alamarka ee Kimberley iyo Alexander Bay. Gobolka Namaqualand ee galbeedka ayaa caan ku ah Namaqualand daisies. Magaalooyinka koonfureed ee De Aar iyo Colesberg, oo ku yaal Great Karoo, ayaa ah kuwa ugu weyn ee gaadiidka u dhexeeya Johannesburg, Cape Town iyo Port Elizabeth. Waqooyi-bari, Kuruman waxaa loo yaqaana saldhiga idaacada iyo sidoo kale guga sanesiga, Eye ee Kuruman. Webiga Orange wuxuu u dhexeeyaa gobolka, isaga oo xuduud u leh xudduudaha gobolka oo ku yaal koonfur-bari iyo Namibiya ilaa galbeed. Wabiga sidoo kale waxaa loo isticmaalaa in lagu waraabiyo beero canab ah oo badan oo ku yaal gobolka xeebta ee u dhow Upington.
Dadka ku hadla afafka Afrika waxay ka kooban yihiin boqollaal ka sareeya dadka ku nool Waqooyiga Gabban marka loo eego gobol kasta oo kale. Afarta afrika ee waqooyiga Waqooyiga Afrika waa Afrikaans, Tswana, Xhosa, iyo Ingiriisi. Dadka laga tirada badan yahay waxay ku hadlaan luqadaha kale ee rasmiga ah ee Koonfurta Afrika, iyo dad yar oo ku hadla luqadaha asalka ah sida Nama iyo Khwe.
Xogta gobolka, Sa ǁa .aμsi 'uμsi ("Waxaan aadi karnaa nolol ka wanaagsan"), waxay ku taal luqadda Nuuru ee Naqniin (ǂKhomani). Waxaa la siiyay 1997 kii by mid ka mid ah afafka ugu dambeeya ee luuqada, Ms. Elsie Vaalbooi ee Rietfontein, oo tan iyo markii uu dhintay. Waxay ahayd markii ugu horeysay ee rasmiga ah ee koonfurta Afrika ku taala luqadda Khoisan. Kadib, Koofur Afrika oo ah shuruuc qarameed, oo ah! KE e | xarra ǁke, waxaa laga soo qaatay afarta waqooyiga Cape
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Northern_Cape_Province&oldid=209925"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 28 Febraayo 2021, marka ee eheed 09:25.